Yini okufanele ibe yinto evamile kashukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe? > Isifo sikashukela
Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ushukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe: izimbangela, izimpawu nemiphumela yesifo sikashukela sokukhulelwa
Izimangaliso eziningi, ikakhulukazi ezingathandeki, zilindele abesifazane abakhulelwe kulesi sikhathi esimnandi nesinzima. Enye yazo ukwanda koshukela wegazi, okutholakale kungazelelwe ngokuphelele futhi kungalindelekile kumama esizayo. Kungani ukuhlolwa kwesinye isikhathi kukhombisa amazinga aphezulu kashukela bese kungani kwenziwa lokhu kuhlolwa?
Kungani abesifazane abakhulelwe bethola ushukela wegazi labo?
Esigabeni sokuhlela ukukhulelwa, owesifazane uvivinywa ngenani elikhulu futhi aphumelele yonke inqwaba yokuhlolwa, okubonakala sengathi, akusizi ngalutho ngokuphelele. Kodwa-ke, udokotela uyazi kahle okufanele ukwenze, ngakho-ke ukulinganisa ushukela wegazi lakho kumele ulungiselele ukukhulelwa. Ngakho-ke, kungenzeka ukunquma ukwephulwa kokubekezelela i-glucose, okuyiqiniso ikakhulukazi kwabesifazane abakhuluphele ngokweqile, abacatshangelwe ukuthi banothile ngokweqile noma abanezingane ezinkulu.
Umgomo wokuhlola ushukela wegazi ngesikhathi sokukhulelwa ungesinye - ukukhomba amathuba ezinkinga ngohlelo lwe-endocrine, izinso namanyikwe. Abesifazane abaningi phakathi nalesi sikhathi banesiphetho sezinkinga ezahlukahlukene, ngakho-ke kubalulekile ukuthi udokotela aqonde ukuthi kungumbuzo wesifo sikashukela noma sikashukela sokukhulelwa.
Uma inani le-glucose esegazini lidlula inani elivumelekile, imizimba ye-ketone ekhuphule ubuthi iqala ukwakhiwa. Lokhu kuyingozi ngqo kuzingane ezikhulayo. Kwesinye isikhathi amazinga eglucose akhuphuka nge-pathologies ethile, ngokwesibonelo, izifo zamanyikwe, ukungalingani kwe-hormonal, i-pancreatitis engalaphekiyo futhi esibuhlungu, ukudakwa kakhulu, isithuthwane.
Ushukela wegazi ophansi ungakhombisa nokuvela kwezifo ezihambisana nesibindi, izinqubo ze-metabolic nemithambo yegazi.
Ukuhlaziywa koshukela wegazi ngesikhathi sokukhulelwa kwenziwa kaningi: okokuqala - lapho ubhalisa, khona-ke - ngeviki lama-30. Phakathi kwalezi zinqubo, kwenziwa isivivinyo sokuphendula ushukela.
Unganikela kanjani ngegazi ushukela ngesikhathi sokukhulelwa?
Nikela ngegazi likashukela ngesikhathi sokukhulelwa kufanele lifane nezingane futhi nabantu abadala bavame ukunikela ngalo. Ungakhetha indlela yaselebhu noma isivivinyo sokubonisa. Njengamanje, kuyindlela ekhanyayo eye yathola ukuthandwa okukhulu, okukuvumela ukuthi uthole imiphumela ekhaya, kepha ngesikhathi sokukhulelwa kungcono ukunikela ukukhetha ekuhlolweni kwelebhu.
Ukulungiselela ukuhlaziya kuqukethe izinyathelo ezimbalwa:
Ukudla kokugcina - kungakapheli amahora angama-8 ngaphambi kokuhlaziywa.
Amanzi ngosuku olu-1 ngaphambi kokuhlaziywa, ungaphuza kuphela abilisiwe noma onamabhodlela ngaphandle kwegesi, amanzi amaminerali noshukela omnandi ngaphansi kokuvinjelwa.
Usuku ngaphambi kokulethwa kokuqukethwe, kunconywa ukwenqaba ukuphuza utshwala.
Ngosuku olwandulela inqubo, udinga ukuyeka ukuthatha noma imiphi imithi.
Ekuseni ngosuku lokunikela ngegazi, awukwazi ukuxubha amazinyo akho.
Ukuhlaziywa kunikezwa ekuseni ngesisu esingenalutho, kusukela ngo-8:00 kuye ku-12:00. Ukuhlolwa, kuthathwa inani elincane legazi emunweni, elihlolwa ukuhlolwa kwelabhorethri, emva kwalokho imiphumela ikhonjiswe kwifomu bese inikezwa udokotela ohola ukukhulelwa. Yena-ke, uchaza imininingwane etholakele kwisiguli, anikeze izincomo.
Imiphumela ayihlali iyiqiniso: kunezici ezingathinta ukuthembeka kokuhlaziywa. Isibonelo, ukusetshenziswa kwamafutha, ukudla okuthosiwe futhi okumnandi, ukucindezela kakhulu kosuku olwedlule, ukuphuza umuthi, ezemidlalo ezisebenzayo, i-physiotherapy noma ama-x-ray. Konke lokhu kufanele kuxwayiswe ngaphambi kwesikhathi ngudokotela futhi, uma kunesidingo, kuhlehliswe inqubo.
Amazinga kashukela ajwayelekile kwabesifazane abakhulelwe (itafula)
Izinga likashukela wegazi likamama olindelayo lihlukile kwezinkomba ezamukelwa ngokuvamile.
Itafula likashukela lokukhulelwa
Imvelo yoshukela, mmol / l
Isifo sikashukela sokukhulelwa, i-mmol / l
Esiswini esingenalutho Ngaphansi kuka-4.9 Ngaphansi kuka-5.3
Ihora ngemuva kokudla Kufika ku-6.9 Kufika ku-7.7
120 ngemuva kokudla Akudluli ku-6,2 Akudluli ku-6,7
Ezinye izinkomba zibalulekile ngesikhathi sokukhulelwa.
Amaphesenti we-hemoglobin ye-glycated akufanele abe ngaphezu kuka-6.5%. Imiphumela yamanga ingabonakala ngokushoda kwensimbi uma kwenzeka kulahleka okukhulu kwegazi noma ngokumpontshelwa igazi.
Ukuphambuka emgomweni kashukela kuyingozi kowesifazane okhulelwe nakibelethayo. Nge-hypoglycemia, umzimba awunantengo emithonjeni yamandla. I-Hyperglycemia futhi isongela ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela noma i-gestationalabetes.
Izimbangela zokushintsha kweshukela
Kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa, ukuthuthukiswa kokucabanga kwe-glucose kuwuphawu, ngaphansi kwethonya lapho ukwakheka nokuzimela okuzimele kwe-insulin okwenziwa ngamanyikwe kukhula khona. Ukunxephezela isifo sikashukela ngalesi sikhathi, kuyadingeka ukunciphisa umthamo we-insulin nsuku zonke.
Kwi-trimester yesibili, i-placenta iqala ukwakha. Umsebenzi wakhe we-hormonal unamandla okuvimbela ukukhiqizwa kwe-insulin, ngakho-ke umthamo wawo kwabesifazane abanesifo sikashukela kufanele ukhuphuke.
Ngemuva kwesonto leshumi nantathu lokukhula, amanyikwe yingane engakazalwa iqala ukusebenza. Uphendula ngokuthumela kakhulu i-insulin emazingeni aphezulu kashukela egazini likanina. Inqubo yokubola yeglucose nokufakwa kwayo emafutheni yenzeka, ngenxa yalokho isisindo samafutha esibeletho sikhula ngamandla.
Kusukela ezinyangeni eziyisikhombisa, kube nokuthuthuka embusweni nakwinkambo yesifo sikashukela. Lokhu kungenxa ye-insulin eyengeziwe etholwa ngumama enganeni.
Kungani ubheka ushukela wegazi lakho ngesikhathi sokukhulelwa?
Amanqamu we-glucose ongakhokhisiwe lapho uthwala ingane kuholela ezinkingeni zenkambo evamile yokukhulelwa nama-pathologies ngesikhathi sokukhula kwengane:
Ingozi yokungasebenzi kahle. Ukhuphuka ngezikhathi ezingama-2-3 uma kuqhathaniswa nokukhulelwa okujwayelekile. Amacala okufa kwesibeletho ngenxa yalesi sizalo esibelethweni noma ngemuva nje kokuzalwa akha ingxenye yesithathu yenani eliphelele lokuphuphuma kwezisu.
Ukulimala kwendalo. Isistimu yofuzo, amathumbu, isisu, izicubu zamathambo ziyahlupheka. Ukulimala ohlelweni lwezinzwa nenhliziyo kuyingozi ikakhulukazi. Ngokwezibalo, lokhu kwenzeka kaningi ka-5 kuya ku-9 kaningi.
Ama-Polyhydramnios. Ngenxa yokwanda kwenani le-amniotic fluid, ukuhamba kwegazi kuyaphazamiseka. Lesi simo siholela ku-hypoxia - ukubulawa yindlala komoya we-fetus kanye nomonakalo ohlelweni oluphambili lwezinzwa. Umsebenzi obuthakathaka ungadala ukuqothuka kweningi kanye nokuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
Izithelo ezinkulu. Amazinga kashukela asonyuselwe afaka isandla ekusindisweni kwamafutha asheshayo futhi andise usayizi wesibindi. Ukukhula kwesibeletho akuhambelani. Ukugxila kwe-hemorrhage ne-edema kuyaphawulwa.
Yehlise ukungazetheki. Uma ushukela ukhona kumchamo, kunengozi yokuthola izifo. Abantu abanesifo sikashukela bahlushwa amagciwane omchamo izikhathi ezingama-30% ukwedlula abanye besifazane. Uma kungekho ukwelashwa, izinkinga ezinkingeni zabesifazane abakhulelwe ngendlela yezifo ezinjenge-pyelonephritis, cystitis kungenzeka. Kukhona ukuphuma kwangaphambilini kwe-amniotic fluid, usongo lokuphuphuma kwesisu, ukubuyiselwa kokukhula kwe-intrauterine.
Ukuguga kwe-placenta. Ushukela omningi ubhubhisa izitsha ze-placenta. Ukushoda kwezakhi zomzimba, okuvela ngenxa yokwephulwa kokujikeleza kwegazi, kuholela ekufeni kwesibeletho.
Unganikela kanjani ngegazi?
Phakathi kokunye ukuhlola lapho ubhalisa ngesikhathi sokukhulelwa, ukuhlolwa ushukela kuyimpoqo. Kubalulekile ukugcina ukulawula okuqinile kwe-glycemia, ngoba ukuthuthukiswa kokukhulelwa kuthinta izinga layo.
Le nqubo kumele ilungiselelwe kahle. Owesifazane kufanele abe nempilo, phambi kwanoma yisiphi isimo esingakhululeki, udinga ukuxwayisa udokotela noma ahlehlise usuku lokulethwa kokuhlaziywa.
Igazi lithathwa ekuseni esiswini esingenalutho. Ngaphambi kokukhohlisa, kunconywa ukuthi ungadli ukudla amahora angama-8. Lapho kunikelwa igazi le-capillary, ukuhlaziya kuthathwa emunweni, kulihlaba ngesikhafu.
Umchamo uqoqwa ubusuku bonke esitsheni esehlukile. Ukuchama kokuqala akubhekwanga. Ngemuva kosuku, isisindo sonke siyashukunyiswa, amagremu ayi-150-200 aphonswa esitsheni esikhethekile bese eyiswa elabhorethri. Inkomba edlula u-0%, kungenzeka ukuthi kunesifo sikashukela sokukhulelwa.
I-Glycemia iyinkomba ebalulekile okumele igadwe ngabesifazane abakhulelwe. Ngokwesincomo se-endocrinologist, kuyadingeka ukukala ushukela wegazi kanye nemvamisa ayibekile.
Ithebula le-glucose ephezulu enconyelwe (i-mol / L) yabesifazane abakhulelwe ngokuqhathaniswa namanani aphakathi kwabesifazane:
Ukuba khona kwesifo sikashukela sokukhulelwa
Esiswini esingenalutho 3,94 – 5,50 5,8 6,3
Ihora ngemuva kokudla 6,05 – 6,77 6,8 7,8
Ngemuva kwamahora amabili udlile 5,52 – 6,09 6,1 6,7
Ukweqa okujwayelekile kuyisisekelo sokuhlolwa okuqhubekayo nokubona izimbangela zokuphambuka.
Ngokuphula izinqubo ze-carbohydrate metabolism, ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kungenzeka. Leli igama lesifo esivele okokuqala ngesikhathi sokukhulelwa. Ngokwesibalo, lokhu cishe kungu-10-12% wabo bonke abesifazane abasezingeni elibuthakathaka.
Lesi sifo senzeka phambi kwalezi zinto:
ukuzalwa okungaphezulu kweminyaka yobudala engama-35,
Isifo sikashukela (izihlobo zegazi ziyagula),
ukubonakaliswa kwalolu hlobo lwesifo sikashukela ekukhulelweni kwangaphambilini,
ukuthuthukiswa kwezithelo ezinkulu,
ushukela omkhulu wegazi
ukuba khona koshukela emchameni,
Ukuhlukumezeka kanye ne-pathologies yentuthuko noma yokufa kwesibeletho ezikhathini ezedlule.
Ividiyo yesifo sikashukela sokuthambisa:
Umphumela wamanga nokuhlaziywa kabusha
Umphumela wokudlula kwe-6.6 mmol / L egazini elisheshayo unikela ngowesifazane okhulelwe onesifo sikashukela. Ukuqinisekisa ukutholwa, kuthathwa ukuhlaziywa kwesibili ukuthola ushukela ongaphansi komthwalo - ukubekezelela ushukela.
Kwenziwa ngokuya ngohlelo olulandelayo:
Isampula legazi lokuqala lenziwa esiswini esingenalutho.
Lungiselela isixazululo: 50-75 mg we-glucose ingilazi yamanzi afudumele. Phuza.
Igazi lithathwa kabili njalo ngehora.
Ngesikhathi senqubo, owesifazane okhulelwe kufanele adale izimo zokuphumula. Ungathathi ukudla.
Ukunquma imiphumela yokuhlolwa, kusetshenziswa ithebula lemigomo evunyelwe:
Izinga le-glucose (mmol / l)
okwejwayelekile ephukile isifo sikashukela (sikhuphukile)
kufika ku-7.8 7,8 — 11,1 ngaphezu kwe-11.1
Uma inkomba idlula i-11.1 mmol / l, kutholakala isifo sokuxilonga - isifo sikashukela.
Uma ukuhlolwa kokubekezelela kungaphakathi kwemingcele evamile, kungenzeka ukuthi ukuhlolwa kwegazi kokuqala kwakungamanga. Kunoma yikuphi, kunconywa ukuthi uphinde uphinde uhlaziye, mhlawumbe elabhorethri lesinye isikhungo sezokwelapha.
Ungashintsha kanjani ushukela wegazi?
Ukukhulelwa kweziguli ezinesifo sikashukela kulawulwa yi-gynecologist kanye ne-endocrinologist. Owesifazane kufanele aqeqeshelwe ukuzithiba ushukela ne-insulin (uma kunesidingo). Imfuneko yesifundo esinxephezelwe sesi sifo ukuthobela inqubo yansuku zonke nokudla.
Ukugwema ushintsho olubukhali ezingeni likashukela, kunconywa ukuthi udle ukudla ngezingxenye ezincane ngezindlela ezi-5-6. Khipha ukudla okune noshukela omningi. Ama-carbohydrate alula ayingozi ikakhulukazi: amakhekhe, namakhekhe, namakhekhe, iziphuzo ezinoshukela neziphuzo. Ukudla akufanele kube ngamazambane, izithelo ezimnandi, amaswidi.
Ukuguqula imenyu ngemifino emisha, imikhiqizo ephelele yokusanhlamvu, amabele, okusanhlamvu. Le mikhiqizo yenza umsebenzi wamanyikwe. Izinhlanzi nenyama azikhethi izinhlobo ezinamafutha. Izimbali ziyasebenziseka - i-lentil, uphizi, ubhontshisi, ubhontshisi.
Ukudla ngesikhathi sokulala kufanele kube lula futhi ngamanani amancane.
Ividiyo yesondlo yesifo sikashukela sokuthambisa:
Kwabesifazane abakhulelwe kukhona inkimbinkimbi ekhethekile eklanyelwe ukuzivocavoca kwezemidlalo kanye nokuzivocavoca. Isikhathi ngasinye, zihlukile emthwalweni nasekomeleleni. Iziguli eziningi zibika ukuthuthuka ngemuva kokwenza i-yoga kwabesifazane abakhulelwe. Lapho ukhetha ukuzivocavoca, kufanele kukhunjulwe ukuthi banciphisa ushukela wegazi.
Kunconywa ukuthatha inkimbinkimbi yamavithamini kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela, ukugwema izimo ezinovalo nezicindezelayo - ukucindezelwa kwengqondo kubangela ukwanda kokuhlaselwa ngeglucose.
Isifundo Sevidiyo Yokukhulelwa
Ngoshukela, ukukhulelwa kunezimpawu zazo. Izinga lezinkinga linqunywa uhlobo lwezifo zesifo kanye nenxephezelo lokubuyelwa kwezinga le-glucose emzimbeni kamama.
Ukwanda kwe-glycemia esigulini akuyona inkomba yokukhipha isisu. Ukuhambisana nazo zonke izincomo zochwepheshe emkhakheni we-gynecology ne-endocrinology, ukunquma izindlela zokulawula ushukela nendlela yokuphila, kuzovumela owesimame ukuthi azale futhi azale ingane enempilo.
Ukuthola izinga loshukela wegazi, kuhlolwa umunwe ekuseni ekuseni ngesisu esingenalutho. Ukuze uthole imiphumela ethembekile, lungiselela kahle isifundo:
ungaphuzi lutho ekuseni, ungadli, ungaxubeki amazinyo akho ngokunamathisela, ungagezi umlomo wakho,
nciphisa ukudla kwakho amahora angu-8 ngaphambi kocwaningo,
nikeza ama-carbohydrate asheshayo ngosuku,
Amahora angama-24 ngaphambi kokuhlaziywa, yeka ukuthatha imishanguzo, futhi uma kungenakwenzeka ukuyikhansela, yazisa udokotela ngalokhu.
Ukunquma ukugcwala ushukela kuzovumela ukucubungula kwe-biochemical kwegazi kusuka emithanjeni. Kodwa-ke, okujwayelekile kuhluke kancane, inkomba evumelekile ekuvumeni yi-6 mmol / l.
Uma imiphumela yokuhlolwa yangaphambilini ibonisa i-hyperglycemia, kwenziwa isivivinyo sokubekezelela ushukela.
Ekuseni ngesisu esingenalutho bathatha igazi kusuka emunweni noma emvinini.
Owesifazane okhulelwe uphuza i-100 ml yesisombululo sikashukela.
Ngemuva kwemizuzu engama-60 neyama-120, kwenziwa isampula yegazi ephindaphindwe. Ngalesi sikhathi, awukwazi ukusebenzisa lutho.
Imiphumela yokuhlaziywa iyabhekelwa etafuleni lezinkambiso. Uma kwenzeka kweqa izinkomba, kuqokwa umuntu ozobonisana naye nge-endocrinologist.
Izimbangela nezimpawu zobungozi ze-hyperglycemia
I-Hyperglycemia ngesikhathi sokukhulelwa kungenxa yokungakwazi kokuqina kwamanyikwe ukuhlanganisa insulin ngokwanele. Ngenxa yokuntuleka kwama-hormone, ushukela awusatshalaliswa kumaseli nezicubu, kepha uhlala egazini.
Ama-hormone aklanywe yi-placenta nawo abangela ukukhuphuka kwamazinga kashukela. USomatomammotropin usebenza njengomphikisi we-insulin, usiza ekuqinisekiseni ukuthi fetus ithola ushukela owanele. Inikeza ukukhula koshukela wegazi, kwehlisa ukuzwela kwamangqamuzana kuyi-hormone yamanyikwe.
Izici Zobungozi be-Hyperglycemia:
ukukhulelwa okungaphezulu kweminyaka engama-30,
isakhi sofuzo kushukela,
kwatholakala isifo sikashukela noma isifo sikashukela sokukhulelwa ezikhulelwe zangaphambilini,
umlando wokuphuphuma kwezisu nokukhulelwa okuphuthelwe,
ukukhuluphala noma ukukhuluphala.
Kwezinye izimo, imiphumela yokuhlolwa inikela ngemiphumela emihle engeyiyo. Izici ezifaka isandla ekunyukeni kwesikhashana kwamazinga kashukela ngokwejwayelekile:
ingcindezi, ukukhathazeka ngokomzwelo,
ukungahambisani nezincomo zokulungiselela ukuhlaziywa,
ukuvivinya umzimba ngokweqile ngosuku olwedlule
ukuthatha amaqembu athile ezidakamizwa.
Ukuboniswa kwesifo sikashukela sokukhulelwa
I-Hyperglycemia esigabeni sokuqala iqhubeka inganakwa, kanti owesimame uthi izimpawu zokuqala zezinguquko zomzimba ezihambisana nokukhulelwa. Izimpawu ze-pathological zibonakala ngokukhanyayo ezivela ku-trimester yesithathu yokuthinta. Lokhu kungenxa yokuhlanganiswa okusebenzayo kwama-hormone yizindlala ze-adrenal, i-placenta, i-hypothalamus, kanye nomthwalo owengeziwe kumanyikwe. Ngalesi sikhathi, owesifazane okhulelwe uphawula lezi zimpawu ezilandelayo zesifo sikashukela:
ukoma okungapheli, umlomo owomile,
isifiso sokudla, inzuzo esheshayo,
isikhumba esomile, ukulunywa endaweni yezitho zangasese,
ukwehla kwamandla okubuka,
ukukhipha ukuphuma komchamo
ukukhathala, ukubekezela, ukozela.
I-Hyperglycemia ngesikhathi sokukhulelwa iyingozi kumama okhulelwe nasesibelethweni. I-Pathology isongela ukuphuphuma kwesisu okuzenzakalelayo, ukuqandusela kwengane noma ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
Ngezinye izikhathi ingane iba nezinkinga zokuzala kanye nokulimazeka:
ukukhuluphala ngokweqile kwesisindo - i-macrosomia,
amazinga e-insulin aphezulu, athi ngokuzayo asongele izinkinga ezenzeka njalo ze-hypoglycemic,
i-fetopathy yesifo sikashukela - ukusebenza kahle kwezinso, imithambo yegazi, amanyikwe,
ithoni ephansi yemisipha
ukuntuleka kwezikhanyiso zomzimba ngemuva kokuzalwa.
Ukuze ugweme izingqinamba, kubalulekile ukuthi ungazi nje kuphela ukuthi iliphi ushukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe, kodwa futhi nokuligcina. Ukufeza lokhu, ukulandela izincomo ze-endocrinologist kuzosiza.
Isinyathelo sokuqala sokulungiswa kwe-glycemia ukwelashwa kokudla:
Ukudla okuvamisile futhi okuneziqephu ezincane,
ukwenqaba kwemikhiqizo ethosiwe, enosawoti, nokubhemayo,
ukudla okulinganiselwe kwe-carbohydrate
ukucebisa lokhu kudla ngenyama, inhlanzi, imifino, okusanhlamvu, izithelo ezingafakiwe.
Ukuzivocavoca okulinganiselayo kuzosiza ekugcineni ushukela wegazi ojwayelekile: i-yoga, ukubhukuda, ukuhamba ngezinyawo. Kubalulekile ukuthi amakilasi alethe injabulo futhi asizakale, angabangeli ukusebenza ngokweqile kanye nokuwohloka kwenhlala-kahle.
Ezimweni ezibucayi, abesifazane abakhulelwe banikezwa i-insulin therapy. Isilinganiso nemithetho yokuphuza umuthi inqunywa ngudokotela uqobo.
Isimo soshukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe siyisici esibalulekile senkambo ephumelelayo yokutholwa kwesisu. Ukuphambuka kwezinkomba endaweni enkulu kusongela ukukhula kwesifo sikashukela sokukhulelwa, okuthi ngemuva kokubeletha ingane sikhule sibe ushukela. I-Hyperglycemia iyingozi futhi enganeni, ngoba iphazamisa ukusebenza kwezitho zangaphakathi, inomthelela ekuzuzeni ngokweqile kwesisindo, ukuthuthukiswa kwezinkinga ze-hormonal.
Yini ushukela wegazi
I-glucose ingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zegazi lomuntu futhi inemikhawulo ethile nezindlela ezithile. Ngemuva kokuthatha i-carbohydrate enikezela amandla ezicutshini zamaselula, ingena emzimbeni. Uma inani elikhulu lazo lifika nokudla, khona-ke lanqwabelana esibindini esigcinweni, kuphakama izinga likashukela wegazi ngesikhathi sokukhulelwa, okushintsha izinga le-hemoglobin nokuqukethwe kwe-insulin.
Kungani ukuqapha ushukela wakho wegazi ngesikhathi sokukhulelwa
I-glucose iyinkomba enkulu ye-carbohydrate metabolism. Kwabesifazane abakhulelwe abanempilo, inani layo liyashintsha. I-glucose ikhuthaza amandla, ngosizo lwayo umzimba ucebiswa ngezakhi zomzimba. Kwenziwe amaseli omama owakheke kahle kamama kanye nasesibelethweni esikhulayo. Ukuphambuka kungadala imiphumela emibi - ngokwesibonelo, ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi kuhlolwe igazi ukuthola ushukela.
Ushukela okhulelwe kufanele abe noshukela onjani
Izinga elivumelekile likashukela wegazi ngesikhathi sokukhulelwa akufanele lidlule i-6 mmol / L. Amanani ajwayelekile: kusuka ku-3.3 kuya ku-5.5 mmol / L. Lapho izinga liphezulu, lokhu kukhombisa ukuba khona kwe-hypoglycemia nokuqukethwe okuncane kwe-insulin ye-hormone. Kulokhu, kungadingeka ukuthi uguqule (noma ungenelele) ochwepheshe .. Lapho izinkomba ezinjalo zivele ku-trimester yesithathu yokuthinta, zingabhekwa njengokujwayelekile. Ngezansi kwamatafula wokuthi yini okufanele ibe ushukela kwabesifazane abakhulelwe.
Izinga loshukela ngesikhathi sokukhulelwa kusuka emthanjeni
Ukuhlaziywa kumele kuthathwe ngokuqinile esiswini esingenalutho, kepha kwezinye izimo akunakwenzeka noma akuphatheki ukuthi kwenziwe ngunyoko esizayo. Ngemuva kwalokho uchwepheshe ubheka ukunatha kokudla noma iziphuzo eziqukethe ushukela. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukuthi ubhale isithombe esifanele, uthole izinkomba ezinembile futhi unikeze izindlela zokwelapha ezifanele kumama okhulelwe.
Ngaphambi kokudla 4-6,1
Ngemuva kokudla umkhawulo ovumelekile ngu-7.8
Izinga likashukela weminwe ngesikhathi sokukhulelwa
Igazi elivela emunweni kwabesifazane abakhulelwe lithathwa amahlandla ama-2 ngenyanga. Ngenxa yokuhlaziywa, kutholakala ukwephulwa kokuqala kwesimo se-glucose, okungaba okuphezulu noma okuphansi, okucishe kube yingozi ngokulinganayo kumama okhulelwe. Inqubo ihlinzeka ukwenqatshelwa kokudla ngaphambi kokukwenza, kepha uma kungamukeleki, kuyadingeka ukuthi uxwayise uchwepheshe ngokudla: lokhu kuzokuvumela ukuthi uthole umphumela ofanele.
Ngaphambi kokudla 3,3-5,5
Ushukela ophezulu wegazi kwabesifazane abakhulelwe
Ukuhlaziywa okwenziwe esiswini esingenalutho futhi edlula i-6 mmol / L ukuphambuka. Izimbangela zale nkinga zingahluka. Izinkomba zidlula umkhawulo ovumelekile ngenxa yama-polyhydramnios, isisindo esithe xaxa sikamama olindele, izinga elingazinzile lamahomoni. Inkinga ingaqhamuka komama bezelwe, kanye nakwabesifazane abazalelwe yibo ngaphambili okuhambisana nokuvela kwengane enkulu, isisu esilahlekile noma isibeletho esisanda kuzalwa.
Le nkinga yakhiwa ngesikhathi kukhiqizwa inani elikhulu le-insulin yi-pancreas, kuyilapho ushukela omncane ungeniswe emzimbeni. Izinkomba ezingezansi 3.3 mmol / L ziyakufakaza. Kungaba nezizathu eziningi zokucunula lesi simo. Lokhu kufaka phakathi ikhefu elikhulu phakathi kokudla nokudla kwalo okuncane, ukudla okuqeda amandla. Izizathu zingaba ezilandelayo:
Ukuzivocavoca okukhulu komzimba, okuhambisana nokusetshenziswa kanzima kwamandla. Uma ungakwazi ukulahla ngokuphelele amakilasi, kuzofanela ukuthi futhi uthathe ama-carbohydrate (ngokwesibonelo, usebenzisa i-ascorbic acid) njalo.
Ukudla njalo okumnandi kokudla. Ngenxa yakho, ushukela ukhuphuka ngokushesha. Kulokhu, kunokwanda okusheshayo kwamazinga we-insulin, okuwa isikhathi esifushane. Lokhu okuqukethwe ushukela kuholela ekusweleni, ukukhathala, ubuthakathaka kanye nesifiso sokudla uswidi noma ikhekhe elingaphezulu. Ngenxa yalesi simo, kudingeka njalo isidingo sokuthatha amaswidi kanye nemiphumela emibi futhi kusongele ukubonakala kwengane.
Ukudla uphuzo oludakayo i-carbonated notshwala kuba imbangela yokwanda okusheshayo, bese kuncipha kakhulu ushukela. Ngalesi sisekelo, kungenzeka ukwahlulela ngokuvela kwe-pathologies eyingozi, ngenxa yalokho imiphumela emibi ikhula hhayi kumama kuphela, kodwa nengane.
Ungawenza kanjani ushukela wegazi kube ngokwejwayelekile
Odokotela banquma ukuhambisana nokudla okuthile kanye nokukhishwa kwemikhiqizo ethile, ngenxa yokuthi inqubo kashukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe ibuyiselwa. Ekubonisaneni, uchwepheshe uzokutshela ukuthi kunconywa ukunciphisa umkhawulo wokudla okunoshukela, okunamafutha, okuthosiwe, ubisi (luphelele futhi luhlanjululwe), imikhiqizo yamashokoleti, imayonnaise, amasoseji, ushizi, u-ayisikhilimu, ujusi, izithelo, iziphuzo ezinekhabhoni. Ukudla okuwusizo okuthuthukisa ukumuncwa kancane kwama-carbohydrate: ama-nokunye okufana nokolweni, amazambane abhakwe, ukolweni.
Ochwepheshe baluleka ukuthi kudliwe inyama yenkomo, imifino emisha kanye nemidumba. Uma ngaphambi kwalapho umama okhulelwe akazange athathe amavithamini kwabesifazane abakhulelwe, ngakho-ke kungcono ukukwenza manje. Ukuvimbela ushukela wokuzivocavoca kuzosiza ukugcina impilo enempilo nezivivinyo ezihleliwe ezijwayelekile. Kwezinye izimo, ukwelashwa kwe-insulin kuyadingeka ekwelapheni lesi sifo. Udokotela uzokwenza ukuhlolwa futhi, ngokwephula umthetho othile, uzoncoma ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa, ngosizo lapho kuzobuyiselwa khona ushukela wegazi kwabesifazane abakhulelwe.
Ungakudlulisa kanjani ukuhlaziya
Kuyathathwa ekuseni, ngakho-ke ukunikela ngokudla ngaphambi kokuba kube nzima. Uchwepheshe usebenzisa igazi le-capillary kusuka emunweni ukuze lihlaziywe, enze umjovo omncane ngesikhafu. Ngenxa yalokhu, izinga le-glucose linqunywa, futhi ukubala ukuhlolwa kokubekezelela ushukela, kuthathwa inani elithile lesiphuzo esimnandi. Ungathola isilinganiso sikashukela ngosuku olufanayo ngemuva kwezinqubo.
Umphumela woshukela wegazi
Ngokusebenza kabi, akufanele ungesabi: kwesinye isikhathi umphumela ungamanga. Izizathu zalokhu zingahluka kakhulu. Isibonelo, isimo esicindezelayo, ngoba omama abakhulelwe bathambekele kakhulu ekushintsheni kwemizwa. Izifo ezedlule zithinta ukuxilongwa. Ukulungiselela okungalungile kokuhlaziya ngokuvamile kubandakanya amanani akhuphukayo.
Ukulinganisa ushukela ekhaya
Ukusiza abantu abanesifo sikashukela kunedivayisi ekhethekile, sibonga ukuthi ungazitholela yona ngokwayo izibalo zikashukela. Ibizwa ngokuthi yi-glucometer (idivaysi encane yokufomatha enesibonisi esincane). Kuyadingeka ukukala kahle inkomba, ngaphambi kwayo okudingeka ulandele imithetho efanayo njengaphambi kokuhlaziywa (zinikela esiswini esingenalutho). Kubalulekile ukuqapha ikhwalithi yemichilo yokuhlola, okumele igcinwe ngokufanele futhi ibe nempilo yeshelufu eyamukelekayo. Ngemuva kwalokho inqubo ejwayelekile yeglucose kwabesifazane abakhulelwe izokhonjiswa kahle.
Imicu yokuhlola ifakwe edivayisini futhi iyasebenza.
Isikhafu-ipipi sinamathele endaweni yokubanjiswa ngokuzayo.
Kudonswa ithonsi legazi, okulethwe kulo lelo divayisi.
Ngemuva kwemizuzwana embalwa, umphumela uvela (isikhathi sibalwa ngokuya ngohlobo lwedivayisi nokusebenza kwayo).
Kuhlangana ngani ikhofi ne-cholesterol: ingabe isiphuzo sithinta izinga laso egazini?
Ukujikeleza kwemitha kashukela kashukela okungabonakali
Ijusi katamatisi yesifo sikashukela sohlobo 2 liqiniso eliphelele ngezinzuzo nobungozi besiphuzo esiqabulayo
Ososayensi abasondelene nokwakha ikhambi lesifo sikashukela sohlobo 1
Ukubuyekezwa mayelana nomuthi i-Dianormil
I-Zucchini ngoshizi oluhlaza okwesibhakabhaka kanye ne-pepper ebunjiwe ye-pepper
Amacwecwe eNovostat: imiyalo esetshenzisiwe
I-Novostat - isidakamizwa sokwehlisa i-cholesterol Ukweqiwa kwe-cholesterol egazini isimo esiyingozi kakhulu. Kusebenza njengesici esengeziwe ekuthuthukisweni kwezifo zenhliziyo. ...
Amantongomane zikaphayini ukuze kube ngokwejwayelekile imetabolism kushukela
I-Essliver Forte - imiyalo yokusetshenziswa nezinkomba, ifomu lokukhipha, ukwakheka nentengo
Uyini imfundo ye-pancreatic?
Amamitha kashukela egaziAma-sweetenersIzinkinga zesifo sikashukelaImibuzoUkudla ngesifo sikashukelaIzinhlobo NezinhloboIsifo sikashukelaUkwelashwa nokuvimbelaUkuxilongaIsifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekile
Isifo sikashukela nakho konke ngakho
I-glucose yokuhlola ukubekezelela ushukela (ushukela): usifaka kanjani futhi uphuze isisombululo sokuhlaziywa ushukela?
I-halva yesifo sikashukela: izici zokusebenzisa
Kungenzeka yini ukwenza i-massage yesifo sikashukela nokuthi kwenzekani
Ungakugwema kanjani ukubhema kwesifo sikashukela ngamakhambi abantu
Ungayisebenzisa kanjani ipeni yesirinji ukuthola i-insulin?